Rastrabani.com | उपत्यकाको सडक विस्तार ठप्प, कहाँ कुन आयोजना अलपत्र ? - Rastrabani.com उपत्यकाको सडक विस्तार ठप्प, कहाँ कुन आयोजना अलपत्र ? - Rastrabani.com
पेप्सीकोलानजिकै मनोहरा पुलदेखि बाहाखा बजार हुँदै निकोसेरा खस्याङखुसुङ पुलसम्मको सडक विस्तारको काम ०७४ असारदेखि सुरु भएको हो । यो सडक विस्तारमा तीनवटा निर्माण कम्पनी संलग्न छन् । अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
विशेषगरी बाहाखा बजारमा समस्या रहेको सडक विस्तार आयोजनाको भनाइ छ । ०७६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ ।